Mareykanka oo Daacishtii ugu badneyd ee Soomaaliya ku dilay duqeyn uu ka fuliyay Puntland – Somali Top News
Mareykanka oo Daacishtii ugu badneyd ee Soomaaliya ku dilay duqeyn uu ka fuliyay Puntland
Taliska Ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika, ayaa ka hadlay howlgal dhinaca cirka ah oo todobaadkan uu ka geystay qeybo kamid ah deegaanada maamulka Puntland.
War lagu daabacay Twitter-ka Africom, ayaa lagu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha leheyn ee Droness-ka ah ay dhowr gantaal la dhaceen goobo ay isku uruursanayeen Daacish, halkaasna ay ku dileen 13 xubnood.
Agaasimaha sirdoonka howlgalka Mareykanka ee Afrika Heidi Berg, ayaa sheegay in meelaha ay duqeeyeen ay tahay goobaha ay argagixisadu ku qariso hubka, ku sameyso qaraxyada, ku tababartaan kuna abaabulaan ficiladooda wuxushnimada ah, sida uu yiri.
Weerarka oo Arbacadii ka dhacay deegaanka Cameeyra oo hoosta degmada Isku Shuban ee buuraleyda Golis gobolka Bari ayaa la sheegay ineysan jirin dad Shacab ah ay waxyeelo ka soo gaartay weerarka, wuxuuna Mareykanka soo jeediyay in lala soo socodsiiyo hadii khasaare Shacab la helo.
Bishii hore ayay ahayd markii weerar dhanka cirka ah oo uu Mareykanka fuliyey isla gobolka Bari uu ku khaarijiyey hogaamiye ku xigeenkii Daacishta Somaaliya iyo shaqsi kale oo gaariga la duqeeyay la saarnaa.
← Jubbaland oo eedeyn kulul u jeedisay dowladda Federalka
Somali refugee and activist earns St. Cloud State diploma this week →
Dowladda Federalka Soomaaliya oo cadaadis dhanka socdaalka ah ku heysa Somaliland
Dowladda Uganada oo faragelin weyn ku heysa midnimada iyo Qaranimada Soomaaliya